Ọzụzụ Ahụike Uche dị njikere-Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi > Ọzụzụ ahụike uche dị njikere
Ụlọ anyị zuru oke nke ọmụmụ ahụike uche dị njikere ịga ga-akuziri ndị ọrụ gị isi ahụike ahụike, ma nyere ha aka ijikwa ahụike nke onwe ha.
Kpọtụrụ ugbu a, anyị ga -enyere gị aka ịmepụta otu obi ụtọ, ahụike na arụpụta ihe.
Usoro ọmụmụ niile dị awa atọ ogologo (ma ọ bụ ọkara ụbọchị) ma nwee ike ịbute ya na ntanetị ma ọ bụ ihu na ihu.
Mmetụta Ahụike Ọgụgụ Isi
Ndị otu ahụike
Nkwado Ndị Ahịa na Ahụike Echiche
Uche Uche na otu esi akwado onye
Ijikwa Ahụ Ike Uche na Ọrụ
Mmetụta Ahụike Ọgụgụ Isi maka Ndị Na-enye Egwuregwu na Ntụrụndụ
Oge a bụ iji mee ka mmadụ mata mkpa ahụike ahụike na ahụike dị mma maka mmadụ niile yana iwepụ akụkọ ifo na ihere ịma aka metụtara ọtụtụ nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Mata banyere ahụike uche na otu ọ ga - esi dị iche
Chọpụta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ gbasara ahụike uche
Tụlee ọrụ mkparị na nsogbu ahụike nke uche
Ghọta ihe dị iche na nrụgide na nrụgide
Chọpụta ụfọdụ nsogbu ahụike ahụike uche dị iche iche
Nye isi mmalite nke nkwado na ozi
Oge a na-eme ka ọ pụta ìhè ihe egwu nke ike ọgwụgwụ na nsure ọkụ, kọwaa ihe nkwụghachi bụ yana otu esi ewu ya, chọpụta ụzọ iji gbochie usoro iche echiche na-adịghị mma.
Chọpụta ihe anyị na -ekwu maka 'resilience'
Debe usoro iche echiche na -adịghị enye aka n'ụzọ siri ike karị
Ghọta ma mee ọmịiko onwe onye maka nkwụsi ike
Chọpụta ụzọ dị mma isi jikwaa nrụgide
Jiri ụzọ 5 na -eme ka ọdịmma ka mma
Hazie ezumike na izu ike maka nkwụsi ike
Oge a na-achọ ịmata ọnọdụ ndị nwere ike isonye na esemokwu ma webata usoro maka ịgbasapụ esemokwu esemokwu.
Chọpụta mmetụta uche na omume esemokwu
Mụta otu esi ejikwa ókèala na mmekọrịta mmekọrịta uche
Mara otu esi eme ka omume gbasie ike
Mụọ usoro ige ntị iji dozie esemokwu
Ghọta ụdị mkpebi esemokwu ị họọrọ na oge ịmegharị ya
Oge nke a chọrọ ịmebata otu ahụ usoro maka otu esi arụ ọrụ nke ọma, n'otu n'otu yana dịka otu ahụike siri ike.
Ghọta uru nke Atụmatụ Wellness Action
Mepụta atụmatụ Wellness Action
Chọpụta njirimara nke ndị otu ahụike dị mma
Mepụta otu Atụmatụ Nlekọta Ahụ Ike
Oge a chọrọ iji mata banyere nsogbu ahụike ọgụgụ isi metụtara ọrụ ndị ahịa.
Webata ụfọdụ nsogbu ahụike ọgụgụ isi
Tụlee otu esi amata mkpa nkwado ndị ahịa
Ghọta otu kacha mma iji kwado ndị ahịa
Tụlee ka ị ga -esi lekọta ahụike uche gị n'ọrụ
Oge a bụ iji nye nghọta maka otu esi akwado onye nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Ghọta Mgbakọ Ahụike Uche
Nyochaa ahụmahụ dị iche iche nke nsogbu ahụike uche
Nye ntuziaka maka otu esi akwado onye nwere nsogbu ahụike uche.
Chọpụta ụfọdụ ajụjụ bara uru iji mepee mkparịta ụka
Mụta ka esi enwe mkparịta ụka dị mma ma na -akwado
Chọpụta ka anyị ga -esi lekọta onwe anyị anya mgbe anyị na -akwado onye nwere nsogbu ahụike uche
Oge a bụ iji mata banyere mmetụta nke ọrụ na ahụike ọgụgụ isi yana nke ọzọ, ma na-ewebata ngwaọrụ iji kwado ahụike ọgụgụ isi na ọrụ.
Depụta nsogbu ahụike ọgụgụ isi dị iche iche
Kekọrịta ozi na ngwaọrụ iji kwado ndị mmadụ n'ebe ọrụ
Depụta ọrụ njikwa na iwulite ọdịbendị na-akwado ma na-akwado ọrụ
Ebumnuche a dị mkpirikpi maka egwuregwu na ndị na-atụrụ ndụ, ndị nkuzi, ndị nchịkwa egwuregwu, n'ihu ndị ọrụ ụlọ na ndị ọrụ afọ ofufo bụ ndị ga-achọ ịbawanye ihe ọmụma ha na nghọta nke ahụike ọgụgụ isi iji tinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ime egwuregwu na oge ezumike.
Ghọta echiche na echiche na -ezighi ezi gbasara ahụike uche gụnyere mmetụta dị mma nke egwuregwu na mmega ahụ na ahụike anụ ahụ na nke uche
Ghọta ihe mgbochi ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike uche nwere ike ịhụ mgbe ha na -eme egwuregwu ma ọ bụ mmega ahụ
Mara maka etu mkparị na ịkpa oke gburugburu ahụike uche si emetụta ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike uche
Chọpụta ihe omume ị nwere ike ime iji mepụta gburugburu egwuregwu dị mma nke na -agbakwunyere na ịnweta ndị nwere nsogbu ahụike uche.
Nwee obi ike karịa ikwu maka ahụike uche wee mara ebe ị ga -ebinye ndị mmadụ aka ma ọ bụrụ na ha chọrọ nkwado
Mepụta atụmatụ ime ihe iji tinye omume n'ime nzukọ gị
Ahịa na-amalite site na £ 525 maka ọzụzụ ọkara ụbọchị.
Ọ bụrụ na ọdịnaya mmụta abụghị naanị ihe ịchọrọ, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na gị iji hụ na ọ na -egbo mkpa gị. Enwere ike ịhazi ma ọ bụ hazie usoro ọ bụla maka nzukọ gị, anyị ga -enwekwa obi ụtọ isoro gị kpaa nkata. Biko mara na ọrụ agbakwunyere a dịkwa ụgwọ. Iji nweta kọntaktị biko jiri mpempe akwụkwọ kọntaktị dị na ala peeji.
Maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ịme ndokwa maka oge, kpọtụrụ anyị ugbu a.
Chọpụta ihe ndị sonyere na-ekwu banyere nkuzi gbasara ahụike gbasara ọgụgụ isi anyị.